တရားဝင် မှတ်တမ်းမှာတော့ သွားလေသူ ခေါင်းဆောင်ကြီး ကင်မ်ဂျုံအီးဟာ အမိဝမ်းက ကျွတ်လို့
၃ ပတ်သားအရွယ်မှာတင် လမ်းလျှောက်နိုင်ပါသတဲ့။ ၈ ပတ်သားအရွယ်မှာ စကားစတင်ပြောနိုင်ပါသတဲ့။ သူ ကင်မ်အီလ်ဆုံ တက္ကသိုလ်မှာ ၃ နှစ်ကျောင်းနေခဲ့စဉ်အတွင်း
စာအုပ်ပေါင်း ၁၅၀၀ လောက် ရေးသားခဲ့ပြီး အော်ပရာပြဇာတ် ၆ ပုဒ်ပါ ရေးပါသတဲ့။ သူ့ရဲ့ အတ္တုပတ္တိ စာအုပ်ထဲမှာတော့ သူရေးခဲ့တဲ့ အော်ပရာ
ပြဇာတ်တွေဟာ ဂီတ သမိုင်းအဆက်ဆက်က ဇာတ်ထုပ်တွေထက်တောင် ပိုကောင်းပါသတဲ့။ သူ့ရဲ့ အားကစားထူးချွန်ပုံကလည်း အံမခန်းပါတဲ့ဗျာ။ ၁၉၉၄ မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ တစ်ခုတည်းသောရှိတဲ့ ဂေါက်ကျင်းမှာ ဂေါက်ရိုက်သင်ပြီးပြီးချင် ၃၈ ကျင်းရိုက်တော့ ၁၁ ကျင်းမှာ hole-in-one ရတယ်လို့ ပြုံယမ်း မီဒီယာတွေမှာ ဖော်ပြသွားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ရံတော် ၁၇ယောက်က ဒီလိုမျိုး စံချိန်တွေချိုးတာကို
မှတ်တမ်းတင်ပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး
လက်စွမ်းပြပြီးကထဲက ကင်မ်ဂျုံအီးတစ်ယောက် ဂေါက်လောကကို လက်ပြနှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
2/12/2014 09:33:00 PM
အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ငယ်စဉ်ဘ၀လေးတွေကို အင်တာနက်မှာတွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.... Sydney Bristow မင်းသမီးမဖြစ်ခင်တုန်းက အထက်တန်းကျောင်းရဲ့ တီးဝိုင်းအဖွဲ့မှာ Saxophone တီးမှုတ်ခဲ့ပါသတဲ့....
2/11/2014 10:55:00 AM
2/10/2014 04:04:00 PM
စင်ကာပူပြန်ရောက်နေတဲ့ ရက်ပိုင်းတုန်းက ထရွိုင်မြို့အကြောင်း
ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်… နောက်ပြီး စိတ်ဝင်စားလို့ ဟိုရှာဖတ် ဒီရှာဖတ်နဲ့။ Troy မြို့ကြီးရဲ့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားပုံတွေက ကိုယ့်မျက်စေ့ရှေ့မှာ
မြင်နေရသလိုပဲ။ မြန်မာ Sea Game ဖွင့်ပွဲတုန်းက
“မဟာ….ကြီးမြတ်လေသော သမိုင်းကြောင်းများ.. ဒီမြေကြီးထက်မှာဆိုပြီး” ကျွန်တော်တို့ ပုဂံအကြောင်း သရုပ်ဖော်တော့ ရဲစိတ်
ရဲမာန်တွေ တက်ကြွလာသလိုပဲ… ထရွိုင်မြို့အကြောင်းဖတ်လိုက်ရင် လည်းဒီလိုပဲ စိတ်ဝင်စားစရာတွေနဲ့
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော်က ကြေးခေတ်လူသားတွေရဲ့
ဗိသုကာလက်ရာတွေနဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ မြို့တော်ကြီး၊ ကမ္ဘာ့အလှဆုံးဆိုတဲ့ ဂုဏ်ဒြပ်နဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ နတ်ဒေ၀ီတစ်ပါး အလား ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တဲ့
မင်းသမီး ဟယ်လင်၊ ရာဇမာန်ကို ထိလာခဲ့ရင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံခဲ့တဲ့
စပါတာ(ဂရိ) လူမျိုးတွေထဲက ဘုရင်းတပါး ဖြစ်တဲ့ မန်နီလော့စ်၊ အချစ်အတွက် အသက်ပင်ပေးခဲ့ရတဲ့ ထရွိုင်မြို့ရဲ့ အိမ်ရှေ့သခင်
ပဲရစ်၊ သမိုင်းတွင်ခဲ့တဲ့ ထရိုဂျန် စစ်ပွဲကြီးပွား ခဲ့တဲ့ မြို့တော်… အာခီလီစ်၊ ဟက်တာ၊ အိုင်းယက်စ် စတာတွေ အပြင် သူရဲကောင်းတွေ
များစွာရဲ့ သွေး မြေကျခဲ့ရတဲ့ နေရာ၊ ရန်သူတွေကို
ပရိယာယ်ဆင် အောင်ပွဲခံတုန်းက အဓိက အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ထရိုဂျန် မြင်းရုပ်ကြီး၊ ဂရိတွေ ဘယ်လိုမှ တိုက်လို့မရပဲ တပ်ဆုတ်ပြီး သင်္ဘောတွေ
ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတော့ ထရွိုင်မြို့သားတွေ အောင်ပွဲခံ သတိလွတ်နေတုန်း မြင်းရုပ်ဗိုက်ထဲက
ဂရိစစ်သည်ထွက်၊ မြို့တံခါးကို ဖွင့်လို့ ၁၀
နှစ်ကြာ တိုက်ယူလို့မရခဲ့တဲ့ ထရွိုင်မြို့ကြီးဟာ ညတွင်းချင်းမှာပဲ မြေပေါ် ပြားပြားဝပ်သွားခဲ့ရတဲ့
အဖြစ်…..စသည်အားဖြင့် ရေးထားတဲ့ ဟိုးမားရဲ့ ILIAD ကဗျာရှည်ကြီးထဲမှာ ဇာတ်ကောင်များစွာ
သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတုန်း။ ဒါပေမယ့် ဒီ ကဗျာရှည်(၀တ္တု)
ကြီးထဲက ထရွိုင်မြို့ကြီးဟာ တစ်ကယ်ရှိခဲ့တာလား?
1/23/2014 11:15:00 AM
မနှစ်က ဆောက်ခဲ့တဲ့ သင်္ဘော နှစ်စီးကကျတော့
အတော်လေး အကုန်အကျအများသား။ သင်္ဘောကျင်းကို
စာချုပ်နဲ့အပြီး အပ်လိုက်ပေမယ့် အဲ့ဒီ တရုတ်သင်္ဘောကျင်းက သင်္ဘော မဆောက်တတ်ပေါင်။ ဒီတော့ နောက်ဆုံး လိုချင်တဲ့ အရည်အသွေးမရတာနဲ့၊ ပြန်ပြင်ရတာနဲ့၊ နှေးတာနဲ့ လုံးလည်ချာလပတ်တွေလိုက်ပြီးတော့
ကျွန်တော့်တို့ ကုမ္ပဏီက လူတွေထပ်ခေါ်၊ ကျွန်တော်တို့
Contractor တွေကို သင်္ဘောကျင်းထဲထည့်ပြီး ကိုယ့်သင်္ဘော ကိုယ်ပြန်ဆောက်ရတဲ့ အခြေအနေကို
ရောက်ရော။ အဲ….ပြဿနာက အဲ့ဒီ တစ်ပြုံတစ်မကြီးရဲ့ စားစရိတ်၊
အထွေထွေသုံးစရိတ် ဒါတွေက Delay ဖြစ်ရင်ဖြစ်သလောက် Overhead cost ကတက်လာပါပရော။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ တရုတ်မှာ
Custom clear လုပ်တာတွေ၊ Transport စရိတ်တွေ ဒါတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ ဘေဂျင်းက
ကျွန်တော်တို့ရုံးလည်း ၁နှစ်ခွဲလောက် ရော့ရော့ ကြိုက်သလောက်သာယူပေတော့ ဆိုပြီး ပေးလိုက်၊
ပေးလိုက်နဲ့ ငွေလုံးလုံးမရှိတဲ့ ဘ၀ကိုရောက်သွားရော။ ဒီလိုနဲ့ အေးဂျင့်တစ်ယောက်နဲ့ တွဲလုပ်ဖြစ်လိုက်တယ်။ ဒီအေးဂျင့်က ကော်ဖီမှုန့်ကစလို့၊ Contractor ဖိုးတွေ၊ Custom Clearance တွေ၊
Transport စရိတ်တွေအားလုံး ကြားထဲက အကျိုးဆောင်ပြီး ရှင်းပေးသပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် ရာခိုင်နှုန်းလေးတော့ ကြားထဲက သူကစားတယ်ပေါ့။ အားလုံး အဆင်ပြေပါတယ်။ နောက်ဆုံး သင်္ဘောပြီး ပရောဂျက် စရင်းသိမ်းတော့ ငွေရှင်းတမ်းလုပ်ပါလေရောလား။ ဘယ်၍ဘယ်မျှကျတယ်၊ ဘယ်လိုမျိုးခွဲပေးကြမယ် စတာတွေကို
အီးမေးနဲ့ ပို့ကြသပေါ့။ အဲ့ဒီမှာ အေးဂျင့်ရဲ့ အီးမေးလ်က အဟက်ခံထားရပါသကောလား။ ကျွန်တော်တို့ ဘက်ကပို့လိုက်တဲ့ အီးမေးလ်တွေကို
ဟို ဟက်ကာကောင်က စောင့်ဖတ်ပြီးတော့ နောက်ဆုံး ဘယ်ဘဏ်ကို ငွေလွှဲရမလဲ၊ ဘဏ့်အကောင့်ပေးပါဆိုပြီး တောင်းတဲ့ စာလည်းရောက်ရော
ကြားထဲက ဖျောင်လိုက်တာပဲ။ ပြီးတော့ သူက ကျွန်တော်တို့
ဆီကို မေးလ်ပြန်ပို့သဗျ၊ သူ့ ဟောင်ကောင်က ဘဏ်နဲ့
သူ့အကောင့် ကို။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း မသိဘူးလေ
အဲ့ဒီကို လွှဲဆိုတော့ လွှဲလိုက်တာ။ လွှဲပေမယ့်
စလုံးက ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီက ကျွန်တော်တို့ အေးဂျင့်နာမည်တပ်ပြီး အဲ့ဒီအကောင့်ကို
လွှဲပေးလိုက်တာ။ ဒီအတွက် ဟိုအကောင်တွေက ဘဏ်ထဲက
ထုတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေရော။ ဒီလိုနဲ့ ဘဏ်က
Transition ကို Cancel လုပ်ပစ်လိုက်တယ်။ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်................
1/06/2014 12:11:00 PM
၂၀၁၃ ကြီးသည် လက်ပြကျန်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ လက်ပြမပြတော့ မသိ၊ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် လက်ပြပြီး ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ က စခဲ့သော သင်္ဘောနှစ်စီးသည်၊ ၂၀၁၃ ဒီဇင်ဘာတွင် ထွက်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ တစ်စီးက မီးထိုးဖို့ တစ်စီးက ကက်ဆက်ဖွင့်ဖို့ အဲလေ…
တစ်စီးက လျှပ်စစ်မီးကြိုးတွေ ပင်လယ်ထဲ ဆွဲပြီး သွယ်ဖို့၊ နောက်တစ်စီးက Offshore စင်အသစ်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ
ပင်လယ်ထဲ ပနက်ရိုက်ဖို့ ဘာဖို့ လုပ်တဲ့ Rock Dumping လုပ်ပစ်လိုက်ကြသည်။ ကောင်း၏။ နှုတ်ဆက်ပါသည် ရှန်ဟိုင်း၊ လမ်းခွဲခဲ့ပြီ။ ကိုပီတာကြီး ပြောသလို နန်ကျင်းလမ်းကိုလွမ်းသည်၊ The Bund ကိုလွမ်းမည်၊ ယောင်ချာချာနှင့် ရှင်ထျန်ဒီး ကိုလွမ်းပြီး ကျန်ခဲ့မည်။ ဒီလိုနှင့် ၂၀၁၃ သည်ကုန်သွားလေ၏။ ဘလော့ဂ်မတင်ဖြစ်။ သူကြီးမင်း၏ တစ် လိုဖြစ်နေပြီ။ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်................
1/04/2014 02:37:00 PM
N!xau သို့ The Gods Must Be Crazy ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက Gods must
be crazy ဇာတ်ကားလေးကို ကြည့်ဖူးကြမှာပါ။ ဒီရုပ်ရှင်ကို
၁၉၈၀ ခုနှစ်က Jamie Uys ဆိုတဲ့ ဒါရိုက်တာက ရေးသား ရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ အာဖရိကတိုက်မှာ ပထမဆုံး ရုံတင်ပြသခဲ့ပြီး စံချိန်တင်
လူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။ နောက် နိုင်ငံတကာက ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ
ပြသဖို့အတွက် မူရင်း အာဖရိက စကားပြောတွေကို အင်္ဂလိပ်လို ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ ဂျပန်မှာ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ စံချိန်တင်
ပြသခဲ့ရပြီး အလွန်ကို အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာပြသခဲ့ပြီးတော့
ဒီရုပ်ရှင်ဟာ ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ကျော် အမြတ်အစွန်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမိတာကတော့ ဒီရုပ်ရှင်ထဲက
ကိုကာကိုလာ ပုလင်းလေး တစ်လုံးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လိုက်ကျော်ကြီး အာဖရိကတိုက် ကာလာဟာရီ
သဲကန္တာရထဲက Bushmen စီ အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို သန်ပေါင်းများစွာ စံချိန်တင်ပြီး အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ရဲ့ အဓိက ဇာတ်ဆောင်တစ်ယောက်ဟာ
ဘယ်လောက်များ အကျိုးခံစားခွင့် ရခဲ့သလဲဆိုတာကိုပေါ့။
ဒီရုပ်ရှင်ထဲက ဇာတ်လိုက် စီ ရဲ့ မူရင်းနာမည်ကတော့ Nǃxau
ǂToma ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ နမ်မီဘီယား ဒေသမှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့ သူ့အသက်
ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတာကို သူကိုယ်တိုင် မသိခဲ့ပါဘူး။ သူဟာ အာဖရိက ဘာသာစကား ၃ မျိုးလောက်ကိုတော့ ကောင်းကောင်းကြီး
ပြောတတ်ပါတယ်။ မြို့ကြီးတွေကိုလည်း တစ်ခါမှ
ရောက်ခဲ့ဖူးတာမဟုတ်သလို ဒီရုပ်ရှင် မရိုက်ကူးခင်အထိ သူ့ဘ၀မှာ လူဖြူ ၃ ယောက်လောက်ပဲ
မြင်ခဲ့ဖူးတာပါ။ နောက်ပြီး ပိုက်ဆံ၊ ငွေကြေးဆိုတာကို
တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးခဲ့ပါဘူး။ ငွေကြေးနဲ့ ဘယ်လို
ဖလှယ်ရမှန်းလည်း မသိသလို၊ ဒီငွေကြေးရဲ့ တန်ဖိုးကိုလည်း
မသိခဲ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခအတွက်
သူဟာ ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ အောက်သာ ရရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်................
11/28/2013 03:43:00 PM
အဆုံးစွန်အထိ ခရီးဆက်နေဦးမည့် Voyager ၁ နှင့် ၂
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက လမင်းကြီး ရယ်၊ မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ် လက်နေတဲ့ ကောင်းကင်က ကြယ်လေးတွေကို
လသာတဲ့ ညဖက်ဆိုရင် မော့ကြည့်ပြီး အများကြီး စဉ်းစားခဲ့ဖူးတယ်။ ဒီ ကြယ်လေးတွေက ဘယ်လောက်ဝေးလဲ? ဘယ်နေမှာ ရှိနေတာလဲ? ဘာဖြစ်လို့ ကျွန်တော်တို့ဆီကို ရောက်မလာတာလဲ? ကျောင်းရောက်တော့လည်း ဆရာမက ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကြီးကနေကို
လှည့်ပတ်နေပြီးတော့ သူ့မှာ မိသားစု ဂြိုလ်ပေါင်း ကမ္ဘာအပါအ၀င် ကိုးလုံး ရှိတယ်လို့ဆိုပြန်တယ်။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ နေမိသားစုဟာ နဂါးငွေ့တန်း
ဂလက်ဆီဆိုတဲ့ အရာကြီးထဲက အစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခုတဲ့။ အဲ့ဒီ နဂါးငွေ့တန်းဆိုတဲ့ ဟာကြီးကလည်း စကြ၀ဋ္ဌာ ပင်လယ်ကြီးထဲမှာ
မျောချင်ရာမျောနေသတဲ့။ နောက်ပိုင်း အတန်းထဲမှာ မှန်ပြောင်းတွေ အကြောင်းသင်ရပြန်ရော… ဟိုး အဝေးကြီးက အရာဝတ္တုတွေကို နီးနီးလေးမှာလိုမျိုး
လှမ်းပြီး မြင်ရပါသတဲ့။ အရမ်းအားကောင်းတဲ့
မှန်ပြောင်းကြီးတွေနဲ့ ဆိုရင် ဂြိုလ်တွေကိုပါ လှမ်းပြီး ကြည့်လို့ရပါသတဲ့။ အင်း… ကျွန်တော်တို့ မသိတဲ့ အရာတွေ တော်တော်များနေပါလားနော်….. ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်ကနေ ထိုင်ပြီးတော့
အများကြီးတွေးနေ၊ ငေးနေမဲ့အစား အဆိုပါ ဂြိုလ်ကြီးတွေ၊ ကြယ်ကြီးတွေ ရှိတဲ့ နေရာကို အနီးကပ်သွားရောက်ကြည့်ရှု့လို့ရရင်တော့
ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ပိုပြီးတော့ ဒီအရာတွေရဲ့ အကြောင်းကို သိလာနိုင်တာပေါ့လေ။ ဒီလိုမျိုး လူတွေ စဉ်းစားခဲ့ကြပါတယ်။ စဉ်းစားခဲ့သလို
အကောင်အထည်လည်း ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး
ဂြိုလ်တွေ၊ ကြယ်တွေကို စူးစမ်းဖို့အတွက် လူသားတွေဟာ လမင်းကြီးဆီကို၊ အင်္ဂါဂြိုလ်ဆီကို၊
ဂျူပီတာ ဂြိုလ်ဆီကို… စသည် စသည်ဖြင့် အာကာသ စူးစမ်းရေး ယာဉ်ကြီးတွေ လွှတ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ခု Voyager 1 &2ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးကတော့
ကျွန်တော့် ကွန်မန့် ဘောက်စ်ထဲကို အကိုတစ်ယောက်က ရေးပါလားဆိုလို့ တင်လိုက်ဖြစ်တဲ့ ပိုစ့်လေးတစ်ခုပါ။ ဒီပိုစ့်အတွက် ကျွန်တော့် အဓိက ကိုးကားခဲ့တာကတော့
Nasa နဲ့ Wikipedia ၀ဘ်ဆိုဒ် နှစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Voyager ၁ နှင့် ၂ ဆိုတဲ့ အာသာကယာဉ် ကတော့ ကျွန်တော်တို့
နေမိသားစုထဲက Satun လို့ခေါ်တဲ့ စနေဂြိုလ်ကြီးနဲ့ Jupiter ဂြိုလ်ကြီးနှစ်ခုကို အနီးကပ်လေ့လာဖို့အတွက်
ကနဦး စီမံကိန်းချခဲ့ပေမယ့် ခုတော့ ဒီ ညီနောင် အာကာသယာဉ် နှစ်စီးဟာ သူတို့ရဲ့ လေ့လာရေး
အစီအစဉ်တွေကို ကျွန်တော်တို့ နေမိသားစုရဲ့ အပြင်ဖက် အဆုံးစွန်အထိရောက်အောင် လက်ဆက်
ခရီးနှင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်................
11/18/2013 11:58:00 AM
တကယ်တော့ Naval Architect ဆိုတာ၊ “Art of compromise…” အို….. ငါလွှတ်ချကြည့်လိုက်တယ်….
လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အတိုင်းအတာ၊ ငွေကြေး၊
Commitment ဆိုတာ ဘာလဲ? Ethic
ဆိုတာဘာလဲ? ခဏလေးတော့ ငါ… အားလုံးကို…
10/13/2013 10:14:00 PM
လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ လလောက်တုန်းက ပိုစ့်တစ်ခု တင်ဖြစ်သည်။ ဘာ ဖုန်းဝယ်ရင်ကောင်းမလဲဟုဖြစ်သည်။ S4 or HTC 1 or iPhone5သို့သော် မ၀ယ်ဖြစ်။ ခု ဖုန်းဝယ်ဖို့ ရောဂါ ထနေပြန်ပြီ။ ဘာဝယ်ရမှန်းမသိပေ။ အချိန်ဆိုသည်မှာ ဖြိုက်ကနဲကုန်သွားသည်။ ဖုန်းအသစ်တွေ ထပ်ထွက်နေပြန်ပြီ။ အရင်တုန်းကတော့ ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်လိုက်လျှင်
၂ နှစ်လောက် ခေတ်မီမီ သုံးနေလို့ရသည်။ ခုကတော့
၆ လ လောက်ဆိုလျှင် ကိုယ်ကိုင်နေတဲ့ ဖုန်းက မော်ဒယ်အောက်သွားပြီဖြစ်သည်။ ခက်လှချေတကား။
ခု ရောဂါထနေသည်မှာ iPhone 5s နှင့် Note
3 ဘယ်ဟာရွေးရရင် ကောင်းမလဲ ဟူသော အရာပင်ဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ထဲမှာ လျှောက်မွှေပြီး
review တွေ ဖတ်ကြည့်သည်။ သူ့ဟာနှင့် သူတော့
အားလုံး ကောင်းနေသည်ချည်းသာဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ
ဖုန်းတစ်လုံး ၀ယ်လိုက်လျှင် အနည်းဆုံး ၂ နှစ်တော့ မဖြစ်မနေသုံးရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၂ နှစ် လက်ထဲရောက်နေမည့် ဖုန်းအတွက်
ကျွန်တော့်ဟာ ကျွန်တော် review လုပ်ကြည့်သည်။ 5s နှင့် Note3ကို ယှဉ်ကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။
Samsung သည် ကော်ခွံထဲက မထွက်သေးချေ။ Leather casing ဟု ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်အောင် လုပ်ထားသော
ကော်ခွံသည်သာ ဖြစ်သည်။ Hard ware အားလုံး
ဈေးပေါသော အရာများကို သုံးထားသည်။ အရင်
S4 သုံးသူများကို လိုက်ကြည့်လေသော်… screen ကွဲသူများလေသည်။ ပြုတ်ကျသည်နှင့် Screen ကွဲလေသည်။ screen ဘေးနားမှ ကာထားသော လုိုင်းကလေးမှာ ဟောင်းလောင်းပေါက်
ပိုက်ကလေးဖြစ်သည်။ ပြုတ်ကျလျှင် ပိန်သွားလေသတည်း။ ထို ဟောင်းလောင်းပေါက် ပိုက်ကလေးပြီးလျှင် သံမဏိဟု
ထင်ယောင် ထင်မှာ ဖြစ်စရာရှိသော မည်သည့်အရာမှန်းမသိသည့် သတ္တုတစ်ခုဖြင့် ကာထားကာ ၃ လလောက်ကြာရင်
ကွာထွက်ကုန်လေ၏။ ထို့ကြောင့် အတွင်းကလီစာများသည်
iPhone 5s ထက် Spec မြင့်ပြီး သုံးလို့ကောင်းသော်လည်း အကြမ်းပတမ်း သုံးသူများအတွက်
iPhone 5s သည် ပိုမို သင့်လျှော်သည်ဟု ကောက်ချက် ချမိလေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်… မည်သည့်ဖုန်းကို လက်ထဲ ထဲ့ပေး
ထဲ့ပေး ပျက်အောင် ကိုင်သော ကျွန်တော်၏ ရှုမငြီးသည် iPhone5လက်ထဲထည့်ပေးလိုက်သော်
အချိန်အတော်အတန် ငြိမ်ပြီး complain မတက်ဘဲ နေသည်မှာ iPhone ၏ durability သည် ပိုမိုကောင်းသည်ဟု
10/12/2013 07:35:00 PM
တနေ့က ရုံးမှာ အလုပ်လုပ်နေရင်းနဲ့ ဟော်လန်က
တစ်ယောက်ကလှမ်းပြောတယ်။ မင်းတို့ ဆီမှာ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်
တွေက မွတ်စလင်တွေ အိမ်ကို မီးရှို့နေတယ်ဆိုတဲ့။ အစကတော့ ဒီပိုစ့်ကို မရေးဘူးလို့ထားမလုို့။ ဒါပေမယ့် အခုရေးဖြစ်သွားတယ်။ သူ့ကွန်ပျူတာသွားကြည့်လိုက်တော့ ပုဂံ ဘုရားပုံတွေရိုက်ထားတဲ့
ဓာတ်ပုံရယ်။ ပြီးတော့ ဟိုရက်က ဖြစ်သွားတဲ့
အဖြစ်အပျက်ကို ဟော်လန် စကားလုံးတွေနဲ့ ရေးထားတယ်။ ဘာသာပြန်ခုိုင်းလိုက်တော့ အတိုချုံးလိုက်ရင်
အဲ့ဒီအဓိပ္ဗါယ် သက်ရောက်နေတာပဲ။ အင်း ဘယ်လို့ရှင်းရပါ့နော်…
နုိုင်ငံရေးလည်း ကိုယ်က ဒီလောက်စိတ်ဝင်စားလှတာမဟုတ်။ ဒီ သတင်းကြီးကလည်း ကွက်ပြီးရေးထားတဲ့ သတင်းကြီး။
သိတယ်တဲ့။ အင်္ဂလိပ်က ငါတို့နုိုင်ငံကို နှစ်
၁၀၀ ကျော် ကိုလိုနီလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့လေ။ အဲ့ဒီကစရတာပေါ့။ အဲ့ဒီတော့ ကိုလိုနီ လက်ထက်မှာ ပို့ကုန်တစ်ချို့ကို
အန္ဒိယနုိုင်ငံက လူသားအရင်းအမြစ်တွေလည်း ပါတယ်ပေါ့လေ။ ပြီးတော့ လွတ်လပ်ရေးကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဆိုတဲ့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူက ယူပေးခဲ့တယ်ပေါ့လေ။ ငါတို့အတွက်တော့ နိုင်ငံ
လွတ်လပ်ရေး ဖခင်၊ နောက် assassinate အလုပ်ခံရတယ်။ မြန်မာနုိုင်ငံဟာ နုိုင်ငံပေါင်း
ငါးနုိုင်ငံနဲ့ နယ်နမိတ်ချင်း ထိစပ်နေတယ်။ အဲ့ဒီတော့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကြားမှာ နုိုင်ငံသား စိမ့်ဝင်မှု့ရှိသလို၊
ယိုစီးမှု့လည်း ရှိနေတယ်။ ဒီအထဲမှာ တရုတ်ဆိုရင်
ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဖြန်ကျက်မှု့အားကောင်းတဲ့ အချိန် ရောက်လာတုန်းက ချန်ကေရှိတ်ရဲ့ ကူမင်တန်တွေ တပ်ဆုတ်တုန်းကလည်း
တို့နုိုင်ငံထဲ အများကြီး ရောက်ခဲ့တယ်။ ထိုနည်းတူ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနုိုင်ငံနဲ့ ထိစပ်နေတဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှလူမျိုးတွေ စိမ့်ဝင်မှု့ရှိခဲ့တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နောက် ဦးနုဆိုတဲ့ တစ်ယောက်က
၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတယ်။ မဲ ကိစ္စတွေရှိလာတယ်။ မဲပေးဖို့ လူလိုတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ နုိုင်ငံရေး လှည့်ကွက်တွေ ရှိခဲ့တယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေ နုိုင်ငံသားပေးပစ်တယ်။ နောက်ပိုင်းလည်း ဒီလိုမျိုး စိမ့်ဝင်မှု့တွေ ရှိခဲ့တယ်။ နောက်တော့ နုိုင်ငံရေးမှာ အလှည့်ပြောင်းတွေ
ထူထောင်ခဲ့တယ်၊ အဲ့ဒီအချိန်မှာ အဖွဲ့တွေ အများကြီး
ကွဲကုန်တယ်။ နောက် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာလည်း အဖွဲ့တွေ အများကြီး ထပ်ပြီးတော့ ကွဲထွက်သွားသေးတယ်။ ကွဲသွားတဲ့ အတိုက်အခံ အများစုဟာ တောထဲကို ရောက်ပြီး
လက်နက်ကိုင်ကြတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ အတိုက်အခံအနေနဲ့
အစိုးရရဲ့ အာဏာသက်ရောက်မှု့ အ၀န်းအ၀ိုင်းထဲမှာပဲ ဆက်လက် တည်ရှိခဲ့တယ်။ ဒီအထဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပါတီလဲ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ ဒီအစုိုးရ အဆက်ဆက်လက်ထက်မှာ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ ဥပဒေအများစုဟာ
နုိုင်ငံသားတွေနဲ့ စပ်လျှင်းခဲ့တာတွေ များပြီးတော့ တစ်ခြားနုိုင်ငံ၊နုိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့
ဥပဒေတွေမှာ ငါသိသလောက်တော့ လွပ်လပ်ရေးရပြီးခါစနေ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်မှု့
အများကြီး မလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင် ဥပဒေကိုပဲ မေးခွန်းထုတ်စရာ အပိုင်းတွေ အများကြီးရှိခဲ့တယ်လို့
ပြည်သူတွေက ယူဆခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် လွှတ်တော်ဆိုတာ
မရှိခဲ့တဲ့အတွက် ဘယ်သူက မေးခွန်းထုတ်နုိုင်လဲဆိုတဲ့ ဟာမျိုးမရှိခဲ့ဘူး။ မေးခွန်း မရှိခဲ့တဲ့ အတွက် အဖြေ မရှိခဲ့ဘူး။ အဲ့ဒီအတွက် အခွင့်အရေးလည်း မရှိဘူးပေါ့။ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ရာစုနှစ် တစ်ဝက်လောက်ပြီးတော့
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်မှာ ဒီမိုကရေစီဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်။ ငါတို့နုိုင်ငံရဲ့ သတင်းတော်တော်များများကို အခု
8/29/2013 12:18:00 AM
ရလာရင် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ချင်ကြတာ။ ကျောင်းထားချိန်ဆိုရင်
ဘယ်လိုကျောင်းကမှ နာမည်ကြီးတာ၊ အသင်အပြကောင်းတာ၊ ဂုဏ်ရှိတာ စသည်အားဖြင့်ပေါ့။ ကျွန်တော်
မူလတန်းတန်း တက်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းကလေးက ပုသိမ်မှာ။ ပုသိမ်မှာမွေးပြီး၊ ပုသိမ်မှာ ကြီးတဲ့ ကျွန်တော် ပုသိမ်မှာ မူလတန်းတက်ခဲ့တာ
ဘာဆန်းမှာတုန်း။ အဲ… ဆန်းတာက ကျွန်တော်တက်ခဲ့တဲ့
ကျောင်းကလေး။ အ.မ.က ၁၆ တဲ့။ အိမ်နားက မိဘတွေကတော့
သူတို့ လက်လမ်းမီသမျှ တတ်နိုင်တဲ့ ကျောင်းလေးတွေမှာ သား၊ သမီးတွေကို ထားကြတယ်။ ကျွန်တော် အမေကတော့ ဘယ်လိုသဘောထားတယ်မသိဘူး။ ကျွန်တော့်ကို အဲ့ဒီ အ.မ.က ၁၆ ဆိုတဲ့ ကျောင်းကလေးမှာ
သွားထားတာပဲ။ အိမ်နဲ့ တစ်လမ်းထဲ.. ကျွန်တော်နေတဲ့
လမ်းနာမည်က အောင်သုခလမ်းတဲ့။ အောင်သုခလမ်းဆိုပြောရဦးမယ်။ အောင်သုခလမ်းကို နှစ်ပိုင်းခွဲလို့ရတယ်။ အလယ်မှာက ချောင်းကလေးရှိတယ် အဲ့ဒီချောင်းကလေးပေါ်မှာ
တံတားလေးထိုးထားတယ်။ တံတား ဟိုဘက်ခြမ်းကတော့
ကျွန်တော်တို့အိမ်၊ တံတား ဒီဘက်ခြမ်းကတော့
အမက ၁၆ ရှိတဲ့ အခြမ်းပေါ့လေ။ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလမ်းကိုတော့
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ အောင်ဒုက္ခလမ်းလို့ခေါ်တယ်။ ဟိုဖက်ကိုတော့ အောင်သုခလမ်းလို့ခေါ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက စည်ပင်ကလမ်းချဲ့မယ်ဆိုပြီး
ခြံစည်းရိုးနောက်ကို ၅ ပေဆုတ်ဆိုပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တစ်ယောက်ရဲ့ အမိန့်နဲ့ ဆုတ်ပေးလိုက်ရတာ
အိမ်ရှေ့က မရမ်းပင်ကြီး ၃ ပင် ပါသွားရောလား။ အဲ့ဒါက လမ်း တစ်ဖက်ထဲဗျ။ ကျွန်တော်တို့
အောင်သုခလမ်းရဲ့ တံတားကနေ ကျွန်တော်တို့ဖက် တစ်ခြမ်းထဲ။ ဟိုဖက်ခြမ်းကျတော့ မဆုတ်ရဘူး။ ဟိုဖက်ခြမ်းကျတော့ ထိလို့မရလို့ စည်ပင်က နှာစေးသွားလား
မသိပါဘူး။ အဲ့ဒီကနေ အောင်သုခနဲ့ အောင်ဒုက္ခဆိုပြီး
ဖြစ်သွားတာပဲ။ ခြံပဲ့ပါသွားတာနဲ့ ပြီးတာမဟုတ်ဘူး။ အရင်တုန်းက အခိုင်အခန့်ဆောက်ထားတဲ့ ခြံစည်းရိုး
အုတ်တံတိုင်းကို ဖြိုရတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်အုတ်တံတိုင်း
ကိုယ်ပြန်ခတ်လို့က မရသေးဘူး။ စည်ပင်ရဲ့ စံချိန်စံညွှန်းမီ
ဆောက်ရမယ်ဆိုပြီး လိုက်ဆောက်လိုက်တာ မိုးတွင်းကျတော့ အုတ်တံတိုင်း တစ်ခြမ်း ပြိုပါလေရောလား။ အဲ့ဒါ ပြန်ပြင်ရသေးတယ်။ ခုအိမ်ပြန်ရင်တော့ ခြံထဲမှာအရင်အုတ်တံတိုင်းဖြိုတုန်းက
ကျန်ခဲ့တဲ့ အုတ်တွေက နှစ်တွေသာကြာတယ် ဒီအတိုင်းပဲ ခိုင်တုန်း။ အုတ်တံတိုင်းနဲ့တင်ပြီးတာမဟုတ်ဘူး၊ မြောင်းတူး၊ မြောင်းလုပ်ဆိုပြီး ပိုက်ဆံပါ အဆစ်ပါ
ထည့်လိုက်ရသေးတယ်။ ပြီးတော့ ချဲ့မယ်ဆိုတဲ့
လမ်းကလည်း တစ်နှစ်တစ်ခါ မိုးတွင်းပြီးရင် အိမ်ရှေ့ကလမ်းမှာ ပေါက်နေတဲ့ မြက်တွေသာ လိုက်ရှင်းရတယ် ကတ္တရာက ချဲ့လိုက်တဲ့ နေရာကို ဘယ်တော့မှ ရောက်မလာဘူး။ ကတ္တရာရောက်ဖို့နေနေသာသာ၊ အရင်တုန်းက ရှိခဲ့တဲ့ ဓာတ်တိုင်တွေကလည်း အရင်နေရာမှာ
ခုထိရှိတုန်းပဲ။ ဆိုတော့ ဘယ်လို စီမံကိန်းကြီးကို
အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့လည်းတော့ အကျွန်လည်း မလျှောက်တတ်။ ပါသွားတဲ့ မရမ်းပင်သုံးပင်မှာ တစ်ပင်က အချိုသီး၊ နှစ်ပင်က ချိုချဉ်၊ ခုထိ မရမ်းပင်ပေါ်တက်ပြီး မရမ်းသီးမခူးရတော့လို့
8/25/2013 06:01:00 PM
အတွက်တော့ အတွေးတွေ အများကြီး ပေးသွားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးပါ။ ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ဖဘ ပေါ်မှာ ရှဲထားတာတွေ့လို့
ကြည့်ဖြစ်ရင်းနဲ့ဒီပိုစ့်လေးကို ရေးလိုက်မိတာပါ။ ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း
၆၀ ကို ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ ဒါ့ကြောင့် ဒါ့ကြောင့်လို့ ဆိုလိုချင်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ လက်ရှိကျွန်တော်တို့ brain wash ဘယ်လောက်အထိ
အလုပ်ခံရပြီးပြီလဲဆိုတာကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့ ပြောချင်တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီကျောင်းသားလေးတွေနေရာကို အရင်ဆုံး
၀င်မကြည့်ပါနဲ့။ အတန်းထဲက ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့
နေရာကို ၀င်ကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တုိုင်
ဆရာဖြစ်ပြီဆိုပါတော့။ ဒီ ဗီဒီယုိုထဲကလိုမျိုး
ကျောင်းသာ အပြစ်ပေးလိုက်တဲ့ အခြေအနေအထိ မရောက်ဖူးပဲ ထားပါတော့။
8/17/2013 04:47:00 PM
Nike ရဲ့ Fuelband ဆိုတဲ့ ဟာကလေးကို ၀ယ်ဖို့
ဗိုက်ခေါက်မှာ အတော်ပင်ထွက်လာချေပြီတကား။ ဓာတ်ပုံရိုက်ခါနီး အသက်အောင့်သော်လည်း မရတော့ချေ။ ဗိုက်က ရှေ့တင်မက ဘေးသို့ပါ ထွက်လာချေပြီတည်း။ သုို့သော် အားကစားလုပ်ဖို့ကိုမူ မိုးရွာသည်၊
နေပူသည်၊ ဗိုက်ဆာသည်၊ ဗိုက်တင်းသည်၊ စောသေးသည်၊ နောက်ကျပြီ စသည် စသည် ပျင်းရိခြင်းပေါင်း
မြောက်များစွာကို အကြောင်းပြကာ ဘာ အားကစားမှ မလုပ်ဖြစ်တော့ပေ။
ဒီ လက်ပတ်ကလေး ၀ယ်လိုက်လျှင်တော့ ဟိုက တစ်နေ့ကို ကုိုယ့်ရဲ့
Fuel ဘယ်လောက် burn ပြီးကြောင်းဘာကြောင်း အချက်လေး ဘာလေးပြလျှင် အားကစားလေး ဘာလေး
နောက်ပိုင်း ဒုံရင်း ဒုံရင်း ပြန်ရောက်မှာ မြင်ယောင်မိသောကြောင့် မ၀ယ်ဖြစ်တော့ချေ။
8/15/2013 11:59:00 PM
ခုတစ်ခေါက်လည်း စင်ကာပူမှာ အချိန်ကလေးရတာနဲ့ လာရောက်လည်ပတ်သူအများဆုံး မြန်မာဘလော့ဂ် ၅၀ ကို
ထပ်ပြီးတော့ Update လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးရပါတယ်။ မူလ ဒီစာရင်းကို ဖူးနုသစ်က ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ခုလ Update လုပ်ဖို့အတွက် ဘလော့ဂ် List တွေကို ထပ်ပြီးတော့ ရှာ၊ ဘလော့ဂ်တစ်ခုချင်းစီမှာ ချိတ်ထားတဲ့ Linkတွေဆီသွားကြည့်၊ ပြီးတော့ အရင်တစ်ခေါက် ရှိထားတဲ့ List နဲ့ ပြန်တုိုက်၊ တစ်ရက်နဲ့ ပြီးမယ်ထင်ပေမယ့် မပြီးဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ မြန်မာ ဘလော့ဂ်တွေ တော်တော်လေးများလာပါတယ်။ ကျွန်တော် ကောက်နုိုင်သလောက် ဘလော့ဂ်ပေါင်း ၇၀၀
ကျော်ထဲကနေပြီးတော့ ၂၀၁၃ သြဂုတ်လအတွက်ဆိုပြီး Update လုပ်လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ သို့ပေမယ့် ဒီ List ထဲမှာ မပါခဲ့သူများရှိခဲ့ရင်
ပိုမို စုံလင်အောင် ရှာချင်ပေမယ့် နည်းပါးသော အချိန်သည် လည်းကောင်း၊ ညောင်းလာသော ခါး နှင့် မျက်စိကို လည်းကောင်း အားနာရပါသောကြောင့်
ဒီမျှနဲ့ စာရင်းချုပ်လိုက်ပါရစေ။
Alexa ရဲ့ traffic ranking အတုိုင်း စီထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ranking က လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လ အတွင်းမှာ သက်ဆုိုင်ရာ
Blog တွေကိုလာတဲ့ traffic source တွေကို မူတည်ပြီးတော့ တွက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် အမြဲတမ်း
အပြောင်းအလဲ ရှိနုိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို
ဖတ်ချင်ရင် ဟောဒီမှာ ရှင်းထားတဲ့ အတွက် သွားရောက်ဖတ်နုိုင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက် အတွက်ကတော့ ကျွန်တော် နှစ်ပိုင်း
ခွဲလိုက်ပါတယ်။ တစ်ခုက သုတ၊ ရသ ရေးနေတဲ့
ဘလော့ဂ်တွေနဲ့ နောက်တစ်ခုကတော့ သတင်းတွေကို တင်ပြပေးနေတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေ ဆိုပြီးတော့ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ feed များတဲ့ သတင်း ဘလော့ဂ်တွေမျိုးဆိုရင်
Traffic Rank လည်းပိုများတဲ့အတွက် တခြားသော ဘလော့ဂ်တွေကိုလည်း ဒီလိုမျိုး List ထဲကို
၀င်စေချင်တဲ့အတွက် ကျွန်တော် List ကို နှစ်ပိုင်း ခွဲလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ အရင်အတုိုင်းပဲ အသက် ၁၆ နှစ်အောက်ကြည့်ရန် မသင့်လေ
ျှာ်သော အပြာရောင်လွှမ်းသည့် ဆုိုဒ်များနှင့် အစွန်းရောက် ဆုိုဒ်တစ်ချို့ကို ဒီ
List ထဲမှာ ချန်ထားခဲ့ပါကြောင်း။
(Knowledge and Sharing)
and Technology Network
8/15/2013 05:41:00 PM
7 Dangers to Human Virtue1. Wealth without work2. Pleasure without conscience3. Knowledge without character4. Business without ethics5. Science without humility6. Religion without sacrifice7. Politics without principleMahatma Gandhi
ကြာခဲ့ပါပြီ။ လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်ကျော်အချိန်ကာလက ကျွန်တော်တို့ အခု ဒီဘလော့ဂ်ကို ဒီလိုတင်၊ ဒီလိုဖတ်လို့ရလာအောင် ဒီကွန်ပျူတာဆိုတဲ့...
စင်ကာပူမှာတော့ တော်တော်များများသိတဲ့ အတုိုင်း စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ တတိယမျိုးဆက် အကြွေစေ့အသစ်တွေ ထုတ်ဝေလုိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အကြွေေ...
မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ တရားဝင် မှတ်တမ်းမှာတော့ သွားလေသူ ခေါင်းဆောင်ကြီး ကင်မ်ဂျုံအီးဟာ အမိဝမ်းက ကျွတ်လို့ ၃ ပတ်သားအရွယ်မှာတင် လမ်းလျှောက်နို...
ကင်းဆိုတာ ကင်းမလက်မဲ မဟုတ်ဘူး စပိတ်နဲ့ကင်းတဲ့ “ကင်း” ဗီလိန်ဖြစ်ဖူးသလို သူရဲကောင်းလည်းဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ် အော်တိုရန်းနဲ့ နှစ်ဆ “ဒေါင်း”...
ဒီအထဲမှာတော့ အနည်းငယ်ထူးဆန်းတဲ့ မင်္ဂလာဆောင်တွေက မိမိကိုယ် မိမိ ပြန်ပြီး လက်ထပ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာတော့ တရုတ...
ဘာမျူဒါ တိတြိဂံ ဆိုတာက မြောက်အန္တလန်တိတ် သမုဒ္ဒရာရဲ့ အနောက်ဘက်ခြမ်းအပိုင်း၊ ဘာမျူဒါကျွန်း၊ ဖလော်ရီဒါ နှင့် ပူရီတို ရီကို ကျွန်း တိ...
ချောင်းသာသည် ခု တစ်ခေါက်တော့ ရင်ခုန်ဖွယ် ကောင်းသည်။ ရင်ခုန်ဆို သူမကို တွေ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကမ်းခြေတစ်လျှောက် သဲမွမွလေးတွေေ...
N!xau သို့ The Gods Must Be Crazy ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက Gods must be crazy ဇာတ်ကားလေးကို ကြည့်ဖူးကြမှာပါ။ ဒီရုပ်ရှင်ကို ၁၉၈၀ ခုနှစ်က Jamie Uys ဆိုတဲ့ ဒါရိ...
မောင်းသူမဲ့ယာဉ် ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီကိုဝယ်ယူရန် Facebook စီစဉ်နေဟုဆို
အတွဲ (၁၅)၊ အမှတ် (၁၁) နာမည်ကျော် လူမှုရေးကွန်ရက်ဖြစ်သည့် Facebook သည် မောင်းသူမဲ့ယာဉ် ထုတ်လုပ်သည့် Titan Aerospace ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၆၀ ဖြင့်ဝယ်ယူကာ ကမ...
သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အရက်စွဲနေတဲ့ လူရှိရင် ဒါလေးဖတ်ပြီး ပြောပေးပါ
[image: Photo: သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အရက်စွဲနေတဲ့ လူရှိရင် ဒါလေးဖတ်ပြီး ပြောပေးပါ ..................................................................... အရက်စ...
Busy Lady + Tag
Guess what I'm eating?!?! ထမနဲ!!! ဟီးဟီး... မနေ့က ဘုန်းကြီးကျောင်းကနေ ရလာတာ။ ဒီရက်ပိုင်းတွေ အရမ်းအရမ်း အလုပ်ရှုပ်နေတယ်။ သင်္ကြန်အတွက်လည်း အက...
ခြောက်ခြားတဲ့လူ့ပြည် ( ပြေ )
ဖွဈခဲ့မယျ၊ ပကျြခဲ့မယျ၊ ခွားခဲ့မယျ၊ ခံစားရမယျ
ဒီကနေ့က နေက သာနေတယ်…။ အပြင်မှာ လေတွေကတော့ တိုက်နေတယ်..။ ပိတ်ခါနီးမို့ လူရှင်းပြီး ငြိမ်သက်လာနေတဲ့ ဆိုင်လေးထဲက ထောင့်ခုံလေးတစ်လုံးပေါ်မှာ…. တိတ်တိတ်ကလေးေ...
မျိုးရိုးထဲမှ ဆိုးပေကြီးများ...ကျွှန်မတို့ ညီအစ်မ အကြိုက်တူတဲ့ ဆရာသုမောင် စာအုပ်အမည်လေးပါ။ သူတို့ အမျိုးတွေထဲက ဆိုးကြပေကြသူတွေအကြောင်း ရေးဖွဲ့ ထား...
Fear ( အကြောက်တရား )
FEAR ... ( အကြောက်တရား )
လူတိုင်းမှာ အကြောက်တရား.. ကြောက်ရွံထိတ်လန့်ခြင်းဆိုတဲ့ ခံစားချက် ရှိကြပါတယ်..
ဘယ်လောက်ဘဲ သတ္တိကောင်းတဲ့ သူဖြစ်နေပါစေ... ရင်ဆိုင်လိ...
Number of View: 333 ကြိုတင်သိမြင်နိုင်တဲ့ အကြောက်တရား ( Known fear) နဲ့ကြိုတင်မမြင်နိုင်တဲ့ အကြောက်တရား (Unknown fear)မှာ ဘယ်အရာက သင့်ကိုပိုပြီး ကြောက်လန့်...
"ရဟန်းတွေက ဒကာဒကာမတွေလှူတဲ့ ပစ္စည်းလေးပါးကို ခံစားစံစားပြီး စည်းစိမ်ယစ်နေကြတာ"
ထိုစကားကို ပြောခဲ့သူတစ်ယောက်ရှိ၏။ ထိုသူသည် အသောကမင်းကြီး၏ ညီတော်တစ်ယောက် ဖြ...
မောင် မွှေးကြူမှ လန်းစွင့်...
ကျွန်မက လူယောင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ စံပ...
တကယ်ပါ အရင်ကတော့ ပါးစပ်ရာဇဝင်နဲ့ ဟိုဖက်က ပြောပြောနေကြတာပါဘဲ။ နင်တို့က ငါတို့နဲ့ ညီအမ တော်တာတဲ့၊ တို့တွေက ယဉ်ကျေးမူ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေကအစ စာရေးတဲ...
မုန်းမာန် ကင်းဝေး မေတ္တာရေး နေညိုညို ညနေချမ်းမှာ လျှောက်နေကြ ဂျလပစ္စလမ်းနှင့် မရဒါနလမ်းပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်
ရင်း အတွေးတစ်ခု ဝင်လာပါတယ်။ လူတွေ ပြောနေကြတဲ့ "ေ...
*မိုးရာသီ မရှိလို့ မိုးခေါင်တာလဲမရှိပါဘူး*
*တရံ တခါ မိုးလေးတော့ရွာသား*
ထိုည က ခင် ကားမပါချေ.။ ခုနစ်မိနစ်ခရီးကို တစ်က္ကစီ တစ်ထောင်ကျပ်ပေးရသည် ထိုနေရာတွင် ဟိုလျောက် ဒီလျောက် လျှောက်ပြီး. နောက်တစ်နေရာသို့ သွားသည် . နောက်တစ်နေ...
သူကအရပ်ရှည်ရှည်၊ မျက်နှာချိုချို၊ နှုတ်ချိုချို၊ ရုပ်ရည်ကတော့သာမာန်ဘဲ။ မိန်းခလေးတွေနှစ်သက်တတ်တဲ့ ထူးခြားချောမောတဲ့ရုပ်မရှိဘူး။ ပြောရမယ်ဆုိုရင် ...
ဒဏ်ရာဟောင်းများပဲဒီည ဘယ်လိုမှပြေးလို့မလွတ်နိုင် ငိုချင်လျက်လက်တို့နေသလား အဝေးမှာ န...
Where China Meets India Review
ဒီနောက်ပိုင်းမှာ ဖတ်ပြီးတဲ့စာအုပ်လေးတွေကို Review ပြန်လုပ်တဲ့အကျင့်ပျိုးထောင်မိတယ်။ ဒါမှလည်း ကိုယ်ဖတ်တဲ့စာကို ဘယ်လောက်ထိနားလည်သဘောပေါက်မပေါက်၊ ဘယ်လောက်နှစ...
နွေဦးက မလာစဖူး စောစောလာတဲ့အခါ
ငါ့ တည်ငြိမ်ချင်ယောင်ထားတဲ့ စိတ်ကလေးလည်း
Good Morning နှုတ်ဆက်သူ...
“စင်္ကာပူအဲလိုင်းက လျှော့ဈေးတွေချနေတာ တွေ့ပြီးပြီလား၊ ဇူးရစ်ကနေ စင်္ကာပူကို ဘယ်လောက်မှ မရှိဘူး”…၊
အိပ်ခန်းထဲမှ ထွက်လာသော မအိမ်သူ၏အသံကြောင့် ကွန်ပျူတာမျက်နြှာ...
ကျွန်မက အာလူးကို တော်တော်ကြိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလို အာလူးကြိုက်တော့ အာလူးကို ဟင်းချက်စား၊ မုန့်လုပ်စားနိုင်မဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှာကြံပြီး လုပ်စားဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုတလော...
"အသက် ၄၀ လူတွေ မေးတယ် ... ဘယ်တော့များမှ စားရမှာလည်း..." လို့ မိုးမိုး ဆိုသော သီချင်း ကို နားထောင်ပီး ကျွန်မ ကတော့ ဘယ်တော့များမှ .......စားရမှာလည်း ဆိုတဲ့ ...
မောင် မသိပဲ မောင်လို့ နာမ်စားလေး ခေါ်မိတဲ့အတွက်
မောင့်ကို မောင်လို့ ခေါ်ခွင့်ရတဲ့ အခိုက်အတန့်ဟာ
ဒီနေ့ စန်းထွန်း ရဲ့ အမှတ်တရ ဆိုတဲ့ စာလေးဖတ်ပြီး ခံစားချက်တွေ အတွေးနယ်ချဲ့ဖြစ်သွားတယ် ။ ဟုတ်ပါရဲ့ ဘ၀မှာ တွေ့ကြုံဆုံကွဲတွေ ဘယ်လောက်များ များခဲ့ပြီလဲ...
Facebook Page မှာမဟုတ်ပဲ Profile မှာ Comment to Comment reply ပေါ်အောင်လုပ်နည်း ပေ့ခ်ျတွေမှာပဲ ရတယ်လို့ထင်ရတဲ့ Comment to comment reply feature ဟာ တကယ်ေ...
“အဲဒီတုန်းက ငါ့အဖြစ်အပျက်က ခုပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် ရယ်ချင်စရာ တော်တော်ကောင်းခဲ့တာ။ မင်းစဉ်းစားကြည့်လေ။ ငါ မသွားဖြစ်တဲ့ ကုမ္ပဏီညစာစားပွဲ အမှတ်တရ စီ...
မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ တရားဝင် မှတ်တမ်းမှာတော့ သွားလေသူ ခေါင်းဆောင်ကြီး ကင်မ်ဂျုံအီးဟာ အမိဝမ်းက ကျွတ်လို့ ၃ ပတ်သားအရွယ်မှာတင် လမ်းလျှောက်နိုင်ပါသတဲ့။ ၈ ပတ်သာ...
" မောင် ဘာမှ မသိချင်ဘူး ကို ကို့ရင်ထဲမှာ မောင့် အတွက် နေရာရှိသေးလားပဲ မောင် သိချင်တယ်"
" ဆောရီး မောင် ကို့ရင်ထဲကနေ မင်း ကို အခုပဲ ထုတ်ပစ်လိုက်တာ"
ချစ်သော မိတ်ဆွေများအားလုံး မင်္ဂလာပါရှင်။ ဒီနေ့ ပုံမှန်ကြော်စားနေကျ ပန်ကိတ်ကို ငါးမှုန့် နှင့် ကြော်စားလျှင် ပိုမိုစားကောင်းတာကြောင့် အရင်ခဏခ...
ဘလော့နဲ့ဝေးသွားတာ ၁နှစ်လောက်ကြာသွားပါပြီ။ အားလုံးလဲမေ့နေလောက်ပါပေါ့နော်....
ပျော်စရာကောင်းတဲ့ နှစ်သစ်မှာ ဘလော့မှာခင်ခဲ့တဲ့ ဆုံခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းမ...
ကွယ်ဝှက်သိုသိပ်လိုသော စိတ်အစဉ်သည် ဟိုးရှေးကာလများစွာကပင် စိတ်နှင့် ကိုယ်တို့၌ ဖြစ်တည်၏။ လိုအပ်သောကွယ်ဝှက်ခြင်းနှင့် မလိုအပ်သော ကွယ်ဝှက်ခြင်းများအကြာ...
မျှော်ကိုးစိတ်လျှင်၊ ရင်မှာ ခိုဆွဲ
တစ်နေ့က ကျွန်တော့်စာအုပ်စင်ကိုရှင်းရင်း စာအုပ်အဟောင်းတစ်အုပ် ဖတ်ဖြစ်လိုက်သည်။ ထိုစာအုပ်က ၁၉၉၆ခုနှစ်ထုတ် စာပေဂျာနယ်မဂ္ဂဇင်းဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်တစ်အုပ်လုံး ဆရ...
​သ​မီး​လေး​ဖတျ​ဖို့ ​စာ​အုပျ​ဆိုငျ​လှနျ​လှော​ရှာ​ဖှေ​ရငျး​နဲ့​မှ ​ကိုယျ​ကိုယျ​တိုငျ ​တဈ​ခါ​မှ ​မ​ဖတျ​ဖူး​သေး​တဲ့ ​စာ​အုပျ​တှေ​က​လညျး ​အ​န​တ​ဂ်ဂ​မ​ပါ​လား ​လိ...
မေမေ ငိုဖို့ စာလေးတပုဒ်
ခုနစ် နှစ် သမီးလေးထဲက ထားခဲ့ရတော့.. အမေကို မခင်ဘူးပေါ့… လို့ မေမေက အမြဲ ခနဲ့ တတ်တယ်။ တကယ်တော့ ခနဲ့ တယ် ဆိုတာထက် မဟုတ်ပါဘူး…မေမေရဲ့ ဆိုတဲ့ အသဲအသ...
သူမသည် Psychosis တစ်ယောက်သာ ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် သူမသည် အကြောက်လွန်ရောဂါများ၏ သားကောင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်သည်။
သူမသည် အမြင့်ကို ကြော...
ဒီလို ဗယ်လင်တိုင်းနေ့မျိုးမှာ (OnaValentine's Day)
ဖြည်းညှင်းစွာ ပြာမှုန်တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲ ရုတ်တရက် လဲကျသွားချိန်မှာ သွေးအေးစွာနဲ့ အဝေးကို တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်။ မျှော်လင့်ချက်တွေက ဘယ်လိုဖြစ်မှန်းမသိတော့ဘဲ ပေ...
ငါ့အိမ်မက်တွေအစုန်အဆန်ကူးခတ်ရာ နင့်ပါးချိုင့် ပါးပါးလေးကိုလဲ ခိုးသိမ်းထားမိတာ
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ဘဝမှာ အတမ်းတဆုံးအရာက အနုပညာသမားအထူးသဖြင့် ကဗျာဆရာလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါဘဲ။ အိုမာခိုင်ယမ်ရဲ့ ကဗျာလေးလိုဘဲ ကျွန်တော်လိုချင်တာကလည်း သစ်သားတ...
ဟက်ပီးဘတ်ဒေး သို့ ခုနှစ်နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်
ချင်းပြည်နယ်ဆိုရင် စကားဝဲတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ၊ အောက်ချင်းငှက်တွေ၊ ထင်းရှုးပင်တွေနဲ့ ချိုပြောင်ပြောင်နဲ့ နွားနောက်တွေကိုပဲ သွားမြင်...
ကျွန်မ ရှင့်ကို မကြိုက်ခဲ့ဘူး
ကျွန်မ ရှင့်ကို မကြိုက်ဘူး။ သဘောမကျဘူး။ မနှစ်သက်ဘူး။ ဒီထပ်ပိုပြီး ရှင်းလင်း ပြတ်သားတဲ့ ဝေါဟာရ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်မ ရှင်သိအောင် ပြောပြချင်သေးတယ်။ ကျွန...
ပြေပြစ်ချောမော ၊ မြကြောစိမ်းစိမ်...
ဆငျကြားပေါမှာ နလောခဲ့တဲ့ ၁၃နှဈမှာ ဆငျကြားပေါ အစိုးရရဲ့ လုပျဆောငျခကျြတှကေို မကျြခွညျမပွတျ လလေ့ာဖွဈပါတယျ။ ဆငျကြားပေါဟာ ကမ်ဘာမှာ စီးပှားရေး လုပျလို့ အကောငျး...
ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်စကားလုံးတွေနဲ့တွယ်တာမှုတွေကိုအမြဲရောင်စဉ်လွင့်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ကိုယ်ဟာ တကယ်တော့ လိမ်ညာတတ်သူတစ်ယောက်ပါ။ သူငယ်ချင်းလေးမှာချစ်သူရှိတယ်ဆိုတဲ့အသ...
blog မှာ ပိုစ့် မတင်ဖြစ်တာ ကြာနေပြီမို့ ... ဘလော့လည်း အသက်သွင်းရင်း ... ဘာရေးရမှန်းလည်း မသိဖြစ်ရင်း ... ထုံးစံ အတိုင်း ဓာတ်ပုံပဲ တင်လိုက်ပါတယ်။ ... ဓါတ်ပုံ...
ရော်ရမ်း၍များ ဆိုမလား ။
ဒီတစ်ခါတော့ အပြင်မှာ စားဖြစ်ရင် အမြဲမှာနေကျ ဟင်းအတွဲကို အိမ်မှာဘဲ ချက်စားဖြစ်တယ်။ ဟင်းအကြောင်း မရေးခင် အလုပ်ထဲက အကြောင်းရေးအုန်းမယ်နော်။ ဟင်းချက်နည်းက လြွဲ...
သို့ ဖြည့်တင်းစရာ တစ်စုံးတစ်ရာလည်းမရှိသည့်အပြင် ကျွန်ုပ်အား ပုံမ...
၂၀၀၇ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အရေးအခင်းကြီး တခုအပြီးကာလတွေဟာ ခရီးသွားလုပ်ငန်း မှာ အလုပ်လုပ် နေတဲ့ သူတွေ အတွက် တော့ အပန်းတကြီး ဖြတ်သန်းခဲ့ရတ...
"Port State Control Inspection (၁)"
'PSC Inspection' ဆိုတဲ့ 'Port State Control Inspection' ဆိုတာကတော့ သဘေ်ာရောက်ရှိရာ ဆိပ်ကမ်းရဲ့၊ သက်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်းအာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းမှ၊ သဘေ်ာအား စစ်ဆေး...
ပိတောက်ရဲ့သစ္စာကို ကြည်ညိုနေတဲ့ကောင် များလွန်းတဲ့ မသေချာမှုတွေကြား သေချာမှုတစ်ခုက တံခါးကို တွန်းဖွင့်လိုက်ပြီ သင်္ကြန် ………… တဲ့။ တစ်နှစ်ကို တစ်ခါရောက် အ၀ါ...
ကမ္ဘာ့ ပိုင်ဆိုင်မှုအနည်းဆုံး သမ္မတနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
အမေရိကန်သမ္မတတွေနေထိုင်တဲ့ အိမ်ဖြူတော်၊ ပြင်သစ်သမ္မတတွေရဲ့အဲလစ်စီးနန်းတော်၊ ဗြိတိန်ဘုရင်မကြီး အဲလစ်စဘတ်စံမြန်းတဲ့ ဘာကင်ဟမ်နန်းတော်ကြီးတို့ရဲ့ ခန်းနားထည်ဝါမ...
အိုင်ဖုန်း .. အိုင်ဖုန်း ... တော်တော် အလုပ်ရှုပ် ၊ စိတ်ရှုပ်ဖို့ကောင်း တဲ့ ဒီအိုင်ဖုန်း .. ပြောရမယ်ဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ နှစ် ကျော်ကနေ စပြောရမယ် .. သုံးနေက...
ဘုရားပေါ်တွင် မြသပိတ်ပုံ ပေါ်နေ
မြင်းခြံမြို့၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ပြောင်းပြာ တံတားထိပ်တွင် တည်ထားကိုးကွယ်သော လေးညွှန်းစင်္ကြာအိမ်တော်ရာ ဘုရားပေါ်တွင် မြသပိတ်ပုံ ပေါ်နေတာကို ၁၈.၀၈.၂...
AH - ကော်ပီရိုက်တော့မဟုတ်ဘူး ယူသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ AH ဆိုတဲ့ နာမည်လေးထည့်ပေးပါ။. Awesome Inc. template. Powered by Blogger.